About Us - I-Hebei Med Site Medicines Co, Ltd.
Abangani abane bamise i-Hebei Med Site imithi Co, Ltd. ngonyaka ka-2005 ngenxa yokwakhiwa kabusha kwenkampani yakudala. Izinsizakusebenza ezinhle zokuhweba kwamanye amazwe neqembu lobuchwepheshe zihlala ziyinzuzo yethu eqinile. Esikhathini esifushane, sibhalise eminye yemithi kanye nemishini yokwelapha elahlekile emazweni amaningi futhi sithengisa ngokuzinzile. Lokhu kuqinisekisa amandla ethu okuvula izimakethe eziningi futhi sizame amasayithi amasha ebhizinisi.
Manje sinamaqembu amahle wemikhiqizo yokuphefumula (i-oxygen concentrator, i-nebulizer ye-ultrasonic, i-suction ephathekayo yokugcwala, imishini yokudonsa), i-Medical anti decubitus air mattress, izikhwama ze-Drainage nezikhwama zomchamo, umkhiqizo wokunakekelwa kwasendlini (i-infrared themmeter, i-infrared foremometer yegazi , i-sphygommanometer, i-thermometer, i-stethoscope, i-pulse oximeter), ezinye izinto ezilahlekayo zezokwelapha nezokuvikela (imaskhi yobuso, amagilavu, izigqoko, izembozo zezicathula, izigqoko, imigqomo, imibhede yombhede, imikhono, isandiso sowesifazane, njll. ukwesekwa, izihlalo ezinamasondo, imidondolo, izinduku, njll).
I-Dunaliella salina iyimikhiqizo yegolide kulezi zinsuku ezinempilo zabantu, njengoba ukwakheka kwayo kuhambisana nengxenye yezakhi ezikhona emzimbeni we-fluid kanye ne-plasma yeseli, futhi kungondla amaseli ngokuqondile futhi ixazulule inkinga yokulimala kwamaseli. Abantu abaningi ngokwengeziwe emhlabeni wonke bayayisebenzisa futhi bayiphatha njengemikhiqizo yokuqala evikela impilo.
Umlingani wethu omkhulu-Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd idume ngokucebile nge-dunaliella engokwemvelo futhi ephezulu emhlabeni. Ngobuchwepheshe obuphakeme bokukhiqiza, imikhiqizo yethu ye-Dunaliella salina iheha abathengi abaningi ngokwengeziwe.
I-2019-nCoV igxilisa impilo yethu kusukela ngoJanuwari 2020, Ukugqoka okuvikelayo okuvela efektri kusetshenziswe eWuhan futhi kudlala indima ebalulekile lapho. Manje izinsiza zokuhlola okusheshayo, imaski yobuso bezokwelapha, imaski yokuhlinzwa, izibuko zokuzivikela, ukugqoka okuvikelayo, amagilavu ​​...... kuhanjiswa ngokushesha kwamanye amazwe nge-sppeed yethu esheshayo.
"Ikhwalithi kuqala, Inkonzo kuqala, Ukusebenza kahle, Ukuphila ujabule" kuyinto yethu.
Khetha lapha, futhi wanelise lapha ......